Waraysi lagu faaqidayo Tartanka Horyaalka Ingiriiska ee furmaya - Worldnews.com
Waraysi lagu faaqidayo Tartanka Horyaalka Ingiriiska ee furmaya
Waxaa maalinkii shalay ahaa xidhmay suuqii la kala iibsiga ciyaartoyga ee dalka Ingiriiska, intuu suuqu xaamiga ahaana waxa lala kala wareegay ciyaartoy badan oo koox waliba halka ku bannaan ay iskaga buuxinaysay.
Horyaalka Ingiriiska ee Xillia Ciyaareedkan oo Caawa Furmaya
Horyaalka Ingiriiska ee Premier League ayaa ee xilli ciyaareedkan 2017-2018 ayaa caawa fiidkii si rasmi ah daaha looga rogi doonaa. Ciyaarta ugu horeysa ee sanadkaan, ayaa...
Kooxda Manchester City ayaa ku guulaysatay Horyaalnimada Ingiriiska ka dib markii guuldarro lala yaabay oo 1-0 ah ay soo wajahday Manchester United oo garoonkeeda ku...
Horyaalka Ingiriiska ee Premier League ayaa furmaya, ka dib markii uu furnaa suuqa kala iibsiga cayaartoyda ee xilliga xagaaga. Inkastoo aysan jirin tiro aad u badan oo...
Manchester City oo hanatay horyaalka EPL
Kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa hanatay horyaalka Premier League ee Ingiriiska kadib markii shalay laga adkaaday kooxdii ugu soo dhaweyd ee Manchester United....
Luis Suarez ayaa laba gool u dhaliyey kooxdiisa Barcelona oo u awood sheegatay Sevilla kuna guulaysatay koobka Copa del Rey markii afraad ee xidhiidh ah. Sevilla qaybtii...
Mourinho: Manchester United waxay noqon doontaa koox adag
Tababaraha kooxda Manchester United oo ka hadlay xiritaanka suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee horyaalka Ingiriiska ayaa sheegay in kooxda Manchester United ay noqon doonto...
Tababaraha kooxda Manchester United oo ka hadlay xiritaanka suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee horyaalka Ingiriiska ayaa sheegay in kooxda Manchester United ay noqon doonto koox adag, ka sokow khatar ka soo wajihi karta xiritaanka suuqa kala iibisga kahor xiligii loogu tala galay. Mourinho ayaa waxaa kale oo uu sheegay in suuqa la xiray aysan aheyn mid u wanaagsan iyaga, madaama...
Southampton oo sii noolaysay rajada ay horyaalka ka qabto
Kooxda Southampton ayaa talaabo dheer u qaaday dhanka ka sii mid ahaanshaha Horyaalka Ingiriiska ka dib markii ay ka badisay kooxda Swansea City, arrintaas ayaana horseedday in West Brom ka harto horyaalka. Goosha uu sixiixay Manolo Gabbiadini ayaa ka dhigan in Swansea City ay hadda 3 dhibcood ka hoosayso Southampton. Ciyaarta u dambaysa ee xilli ciyareedkanna waxay...
Maanta waxaa la dheelayaa kulamo muhiim ah oo ka tirsan Horyaalka Ingiriiska ee Premier League-ga. Malaha ciyaarta ugu xiisaha badanna waa midda dhexmari doonta labada kooxood ee ka wada dhisan magaalada London ee uu xifiiltanka ba'an ka dhaxeeyo ee Tottenham iyo Arsenal. Laacibka kooxda Tottenham Harry Kane ayaa sheegay...
Waxaa la sameeyay isku aadka wareega sadexaad ee FA Cup-ka waxaana isku beegmay kooxo waaweyn oo wada ciyaari doona kulamo xasaasi ah. Isku aadka wareega sadexaad ee FA Cup-ka ayaa waxaa ka soo baxay kulamo waaweyn oo uu ka mid yahay kulanka u dhexeeya kooxaha Liverpool iyo Everton waxaana kulankaasi loo yaqaanaa Merseyside Derby. Manchester United oo kamid ah kooxaha waaweyn...
Loolan ka taagan kaalinta 4-aad ee horyaalka Ingiriiska
Fursadda ay kooxda Manchester City ugu soo baxayso horyaalka Yurub ee xilli ciyaareedka soo socda ayaa dhaawac soo gaaray, ka dib markii ay xalay barbaro 2-2 ah la gashay kooxda Arsenal. Kooxda Arsenal ayaa u baahan in ay barbaro la gasho kooxda Aston Villa si ay u xaqiijiso in ay ka mid noqoto kooxaha Ingiriiska ee xilli ciyaareedka soo socda ka qeyb galaya horyaalka Yurub....